Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mba tsy ho afo-mololo ny fiaraha-mientana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mba tsy ho afo-mololo ny fiaraha-mientana
Miredareda toy izany ny hafanam-pon’ny mponina miara-mitempo amin’ny Barea, ekipam-pirenena amin’ny baolina kitra, arakaraky ny fahombiazan’izy ireo teo amin’ny dingana famaranana ny Can, dingana voalohany izay nandraisan’i Madagasikara anjara rehefa tafita tamin’ny fanintsanana. Na mazava aza aty aoriana fa tsy kisendrasendra izany fahombizana izany, noho ny fanamafisan’ny vokatra tao aoriana dia ny fahazoana laharana voalohany tao amin’ny vondrona nisy azy, dia samy taitra ka mendimendy avokoa ny rehetra eran’ny tanàna. Tsy nijanona teo anefa, fa nararaotin’ny Barea ilay rivotra mitsoka fandresena izay efa nandramany ny tsirony ka nentina amantsihana ny RDC. Tsy mora anefa ny fomba nanatanterahana izany, ary nampitaintaina mafy ny mpanohana ireo mpilalao efa derain’ny olona toy ny «maherifo»-n’i Gasikara.
Mitovy avokoa ny fihetseham-pon’ny mpanaraka ilay fihaonana na tany an-tokantrano tsirairay, mainka moa fa ny an’ireo nanatri-maso tany an-toerana, ary tsy latsak’izany ny an’ny olona nidina an’arabe rehefa iny nitsidika noheverina tsy afaka hivadika intsony ny fandresena. Nandimby ny fanohanana fanomezan-kery ny hafaliana sy fihobiana, kanjo boribory tokoa ny baolina, tamin’ny minitra farany lasa poizina ilay boribory niporitsaka tsy voasakana nampikobana ny harato taty anatin’ny sehatra arovan’ny Malagasy. Niverina tamin’ny fanohanana indray ny vahoaka ary na tsy very toky aza teo ihany ny ahiahy sao dia mivadika ny vintana. Sedra vaovao fitsapana no lasa fanamafisana ny fiaraha-mientana, izay azo heverina fa vao mainka hiredareda amin’ny fihodinana manaraka.
Tsy mampihena ny hafaliana nefa injay tonga an-tsaina ihany ny fanontaniana, hatraiza ary entina hamokatra inona ity fiarahana miredareda mitory firaisam-po ity ? Mazava ho azy fa fahombiazana no iombonan’ny rehetra anatin’ny fihara-mientana. Tsy isan’andro anefa ny fitrangan’ny fahombiazana mivaigana toy izao vokatra nentin’ny Barea izao. Dia ho tapitra miaraka amin’ny fikatonan’ny ridao any Egypta ve izay fiaraha-mientana izay mandram-pisehon’ny fahombiazana hafa indray ? Fantatra moa fa mila fahombiazana amina sehatra maro ny firenena mba hahafahan’ny vahoaka hivoaka avy ao anatin’izao fahasahiranana iarahan’ny maro mizaka izao, ka miposaka ny hevitra : inona moa no manakana raha toa avadika ny fandinihana ny fahombiazana, ka tsy hiandry ny fisehony fotsiny, fa ilay fiaraha-mientana no entina iaraha-miezaka ho famokarana fahombiazana? Inona moa no antony nifidianana olona hitantana sy hisolo tena raha tsy hanam-panahy afaka hanetsika sy hanome tanjaka izay firaisankina izay?